2.2.2012 ကြာသပတေးနေ့ ည အတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » 2.2.2012 ကြာသပတေးနေ့ ည အတွက်
2.2.2012 ကြာသပတေးနေ့ ည အတွက်
Posted by မောင် ပေ on Feb 2, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 11 comments
တနင်္လာနေ့ ည က အသလက်တီကို နဲ့ တာထွက်လှခဲ့ပေမယ့် ၊ အင်္ဂါညမှာ ဂျူဗင်တပ် ပွဲပျက်လို့ ပြန်ခွာခဲ့တုန်း ၊ ဗုဒ္ဓဟူး ည မှာ မီလန် နှစ်သင်း သရေ ရှုံးနိမ့်ခြင်းများမှာ နစ်မြုပ်ခဲ့ရပါတယ် ။ ဗုဒ္ဓဟူး ည ဆုံးရှုံးမှုများ ကို ကြာသပတေးည မှာ ကန်မယ့် စီးရီးအေ ပွဲ တစ်ပွဲ နဲ့ ပြန် အောင်ပွဲယူချင်ပါတယ် ။
၂:၁၅ အချိန်မှာ ကန်မှာ “ နိုဗာရာ (၂၀) နဲ့ချီယေဗို (၁၃) ” တို့ ပါ ။
နိုဗာရာ စီးရီးအေ၂၀ပွဲကန်အပြီးမှာ ၂ ပွဲ နိုင် ၊ ၆ ပွဲ သရေ ၊ ၁၂ ပွဲ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၈ ပေးဂိုး၄၀ ၁၂မှတ်
ချီယေဗို စီးရီးအေ၂၀ပွဲကန်အပြီးမှာ ၆ ပွဲ နိုင် ၊ ၆ ပွဲ သရေ ၊ ၈ ပွဲ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၆ ပေးဂိုး၂၅ ၂၄မှတ်
နိုဗာရာ အိမ်ကွင်း၁၀ ပွဲ ရလဒ်များမှာ ၂ နိုင် ၊ ၄ သရေ ၊ ၄ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၂ ပေးဂိုး၁၉
ချီယေဗို အဝေးကွင်း ၁၀ပွဲရလဒ်များမှာ ၁ နိုင် ၊ ၃ သရေ ၊ ၆ ရှုံး ၊ ရဂိုး၇ ပေးဂိုး၁၈
နိုဗာရာ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ အားလုံး ရှုံးခဲ့ပါတယ်
၂၉.၁.၂၀၁၂ ပါလာမို ၂-၀ နိုဗာရာ
၂၂.၁.၂၀၁၂ နိုဗာရာ ၀-၃ အေစီမီလန်
၁၈.၁.၂၀၁၂ အေစီမီလန် ၂-၁ နိုဗာရာ (ကိုပါအီတာလီယာ)
၁၅.၁.၂၀၁၂ စီစီနာ ၃-၁ နိုဗာရာ
၈.၁.၂၀၁၂ နိုဗာရာ ၀-၃ ဖီအိုရင်တီးနား
ချီယေဗို အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ
ရှုံး ၊ ရှုံး ၊ သရေ ၊ နိုင် ၊ နိုင်
၂၉.၁.၂၀၁၂ ချီယေဗို ၀-၃ လာဇီယို
၂၅.၁.၂၀၁၂ ချီယေဗို ၀-၁ စီနာ (ကိုပါအီတာလီယာ)
၂၂.၁.၂၀၁၂ လက်ချီ ၂-၂ ချီယေဗို
၁၅.၁.၂၀၁၂ ချီယေဗို ၁-၀ ပါလာမို
၁၁.၁.၂၀၁၂ အူဒီးနီး ၁-၂ ချီယေဗို (ကိုပါအီတာလီယာ)
နှစ်သင်းစလုံး ရဲ့ ခြေစွမ်း က တော့ စိတ်ပျက်စရာပါဘဲ ။
သည်နှစ်သင်း ပထမအကျော့ ချီယေဗို အိမ်ကွင်းမှာ ကန်ခဲ့တုန်းက “၂-၂” သရေကျခဲ့ပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ ဒဲ့ သို့ မဟုတ် ချီယေဗို ခပ်ပါးပါးရှုံး ဖွင့်လှစ်လာနိုင်ပါတယ် ။
ဂိုးပေါင်း ဈေးကတော့ နှစ်ဂိုးသွင်းရင် တစ်ဝက် ဆုံးရှုံးမှာပါ ။
ဇယားရဲ့ အောက်ဆုံး က တန်းဆင်းဖို့ ရာနှုန်းများနေတဲ့ နိုဗာရာ ကို ဘယ်သူမှ ရွေးခြယ်ချင်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ် ။
နောက်ပြီး နှစ်သင်းစလုံးဟာ နောက်ဆုံး နှစ်ပွဲမှာ တစ်ဂိုးမှ မသွင်းနိုင်ခဲ့တာဟာ သည်ပွဲအတွက် ဂိုးပေါင်း အနည်း ဘက် ကို ဦးတည်နေပါတယ် ။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော် က “““ နိုဗာရာ နဲ့ ဂိုးပေါင်းအနည်း ””” ကို ရွေးခြယ်ပြီး သည်ပို့ စ် နဲ့ တင်ပြလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျာ ။
……. Final Fantasy …….
တစ်ဝက်ရှုံးနဲ့အပြည့်နိုင်
အောက်ထိုင်မှ စွတ်ဆက်သွင်းနေရင် နာနဲ့တွေ့ မယ်..
သွားလူဆိုး…….ခုမှအောက်ထိုင်နေတယ်……ညကများထိုင်လိုက်ရင်…ဒီညဆို ကေကေ တို့ ဆပ်ဆပ် တို့လောက်မှာလန်းနေပြီ……ခုတော့………………ရွှတ်….ရွှတ်….
အောက်ကထိုင်ရင် သက်သာ၏ သို့သော် ကြာလာသမျှ မကောင်းဖြစ်တက်တယ်လို့ ဆိုပြန်သော်လည်း
သများတို့နည်းတူ အောက်မှာ ညိမ်နေလိုက်ကြပါ …
ထိတော့ ထိတယ်ကိုရင်ပေ ရေ့..
နိုဗိုရာ ဆိုလည်း ရာတာပေါ့ဗျာ.
ဒါနဲ့ စီ၇ီးအေ တွေဘာလို့ပွဲရွှေ့နေကြတာလဲဗျ..သိရင်လင်းပါဦး..
ဒို့ အကိုပေပေ လူဂျိုးရေ…
ဒီ တပွဲ လေး ကံကောင်းပေးနော် …
နိူဗာရာ 1း2 ပါတဲ့ ခည
ဒီဂနေ့ ဘီယာ မတောက်နိုင်ဖစ်တွားပါတီ ခင်ည ..
ဟုတ်ကဲ့…..နိုဗာရာ နဲ့ ဂိုးပေါင်းအောက်ပါ ခင်ညာ့………….ဟုတ်ကဲ့…..နိုဗာရာ နဲ့ ဂိုးပေါင်းအောက်ပါ ခင်ညာ့……………. ဟုတ်ကဲ့…..နို..ဗာ..ရာ နဲ့ ဂိုး ပေါင်း အောက် ပါ ခင် ညာ့…………………….. ဟုတ်………….ကဲ့…………..နို……..ဗာ…………. ရာ နဲ့………………….. ဂိုး………ပေါင်း…………….အောက်………………………ပါ……………………. ခင်…………………ညာ့……………………ဟုတ်…………………………..ကဲ့……………………………………..နို…………………………….. ဗာ ……………………………………………………….. ရာ ………………………………………………………… နဲ့ ……………………………………ဂိုး …………………………………………………………………………….ပေါင်း …………………………………………………………….အောက်………………အောက်…………အောက်………………အစ်…………………………. အစ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ်စ် ………………………………………………….